Ọdụ Istanbul Ikpeazụ |zọ | RayHaber
[11 / 12 / 2019] Onye Minista Transportgbọ njem tara ndị njem ụgbọ njem ebubo na ihe mberede YHT	06 Ankara
[11 / 12 / 2019] Gaziray Taken n'okpuruala mkpu ala ahụ amalitela	27 Gaziantep
[11 / 12 / 2019] Anyi na-abia na Qatar Airways '1 Millionaire Passar na Sabiha Gökçen	34 Istanbul
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulỌdụ ụgbọ elu Istanbul Ikpeazụ
12 / 11 / 2019 34 Istanbul, General, Isi akụkọ, Turkey
ọwa istanbul guzergahi
Alzọ ikpeazụ nke Kanal İstanbul: Ihe oru Kanal İstanbul ga-amalite site na Yeniköy wee soro Sazlıdere Dam ma zute Marmara site na Küçükçekmece Lake. Channel Istanbul, ebe a na-agbasa asịrị banyere asụsụ gaa n'asụsụ ruo ọtụtụ ọnwa, na-eburu n'uche mgbe ọ na-ekpebi ụzọ ọ ga-aga.
Dabere na akụkọ banyere akwụkwọ akụkọ Sabah Nazif KAraman, Ministrị Na-ahụ Maka gburugburu na obodo mepere atụmatụ Zbank maka oru ngo a. Ministri zigakwaara atụmatụ a na Obodo Obodo Isi Obodo na Istanbul metụtara ụlọ ọrụ nyocha maka nyocha nke mbu.
Ngalaba IMM nke nyocha obodo na-enyocha atụmatụ a. Ndi obodo ga ekpesara ndi Ochichi dika enyochaa. Mgbe Ngalaba kwadebechara ma bịanye aka na atụmatụ ikpeazụ, a ga-enweta echiche site na mpaghara ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ọha. Mgbe ahụ, atumatu ahụ, a ga-akwụsịtụ IMM na mpaghara ime obodo.
Ọdụ Ochie Istanbul
Akụkọ ihe mere eme nke uzo mmiri na - aga Bosphorus laghachi na Alaeze Ukwu Rom. Na mmekorita dị n'etiti gọvanọ Bitinya Plinius na Emperor Trajan, ekwuru banyere mbufe njem nke Sakarya River na nke mbụ ya.
Echiche nke ijikọ Oké Osimiri Ojii na Marmara na eriri siri ike bụ 16. Oge 6 kemgbe narị afọ nke 21. N'etiti afọ 1500, otu n'ime nnukwu ọrụ 3 nke Alaeze Ukwu Ottoman mere atụmatụ bụ ijikọ Osimiri Sakarya na Ọdọ Sapanca na Oké Osimiri Ojii na Osimiri Marmara. 1550 bịara na nkata ahụ n'oge ọchịchị Suleiman Onye Ebube. Ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ Sinan na Nicola Parisi, bụ nnukwu ụlọ iwu abụọ nke oge ahụ, malitere ịkwadebe maka ọrụ a n'agbanyeghị agha ndị ahụ.
Ozi Nka na ụzụ Kanal İstanbul
A ga-emejuputa ya na mpaghara European nke obodo ahụ. A ga-emeghere ụzọ mmiri na-agba agba n’etiti Oké Osimiri Ojii na Oké Osimiri Marmara iji mee ka nsogbu ụgbọ mmiri na Bosphorus dị mfe, nke bụ ụzọ ọzọ ugbu a n’etiti Oké Osimiri Ojii na Osimiri Mediterenian. N'ebe ebe ọwa mmiri na-ezute Oké Osimiri Marmara, a ga-ehiwe otu n'ime obodo ọhụrụ abụọ ahụ nke 2023 ga-ehiwe. Site na ọwa a, Bosphorus ga-emechi kpam kpam n'okporo ụzọ ụgbọ mmiri na peninsala abụọ abụọ na agwaetiti ọhụrụ ga-etolite na Istanbul.
Ogologo 40 - 45 km
Obosara (elu): 145 - 150 m
Obosara (isi): 125 m
Omimi: 25 m
Ezubere 453 na nde square. E kewara mpaghara ndị ọzọ na ọdụ ụgbọ elu nwere nde mpepu 30, Ispartakule na Bahçeşehir na narị nde 78, okporo ụzọ nwere nde square 33, ọnụ ụzọ mpaghara na nde 108 square na 167 nde square na 37 square square na-ekewa na mpaghara akwụkwọ ndụ. A ga-eji ala ahụ ewepụtara rụọ ọrụ na-ewu nnukwu ọdụ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ mmiri, a ga-eji ya mejupụta ebe a na-egwu okwute na ebe a na-egwupụta okwute. Ulo oru ngo a nwere ike kari ijeri $ 10.
15 Jenụwar ekwuputala ụzọ ọrụ ahụ na 2018. Mịnịsta na-ahụ maka ationgbọ njem mere ka ọha na eze mara ọkwa na ọrụ ahụ ga-agafe Ọdọ Küçükçekmece, Sazlısu Dam na Terkos Dam.
Dam na ọdọ mmiri a ga-eji rụọ ọrụ
Dabere na atụmatụ ahụ, mmalite nke Channel Istanbul ga-adị n'akụkụ ọdụ ụgbọ elu Istanbul. Ihe kachasị mkpa maka Minista maka ịhọrọ okporo ụzọ a bụ na ọtụtụ ala ndị dị na mpaghara ọwa mmiri bụ nke ebe a na-edebe ego nakwa na Sazlıdere Dam na Küçükçekmece Lake ga-eji ya na ọkwa kachasị elu mgbe emeghere ọwa ahụ.
A ga-arụ ọrụ nlegharị anya na mpaghara 16 kilomita na mpụga Sazlıdere Dam na Küçükçekmece Lake. Itivezọ doro anya nke isi nzuzu Istanbul ga-abụ Yeniköy-Sazlıdere Dam-Arnavutköy-Başakşehir-Küçükçekmece Lake. Ministri gburugburu ebe obibi na obodo ịrịọrọ obodo na ụlọ ọrụ metụtara akụrụngwa na ọrụ nkwenkwe ụgha maka atụmatụ afọ, afọ na ọrụ maka Kanal 50-100. N’ikwekọ n’uche ndị mmadụ ruru n’ozi ahụ, emebere atụmatụ mmepe 1 / 100.000. Ọ bụ Director Directorate of Spatial Planning dị n'okpuru aka kwadebere atụmatụ ahụ.
Ọdụ Istanbul - Agbata obi na ọdụ ụgbọ elu Istanbul
Site na atụmatụ ahụ, a na-ekpebi ebe obibi ọhụrụ, mpaghara azụmaahịa, ebe ndị njem na ebe idobere ụzọ n'okporo ụzọ Kanal Istanbul na ụzọ ekpebie. Dabere na oningkpụrụ Mgbanye, Ọwa ahụ ga-amalite site na Yeniköy na North, 3. Ọdụ ụgbọ elu ga-adị n'akụkụ. Emegoro ogologo 44 na obosara 200 na mpaghara ugwu na ndịda nke ọwa ahụ ga-abụ oke osimiri okomoko. Ihe kachasị mkpa maka ministri ịhọrọ okporo ụzọ a bụ na ọtụtụ ala dị na njikọ ọwa bụ nke ebe a na-edebe ego. Dika data akwadoro n’ime atụmatụ a, ọtụtụ n’ime ala ọwa ahụ gafere na-eji ọrụ ugbo. Ihe oru ngo a bukwara iji nye oke uru na Sazlıdere Dam na Küçükçekmece Lake. Sazlıdere Dam ga-anọ n'ọwa mmiri.
Ọdọ mmiri Kucukcekmece, nke enyere ikike iti mkpu n'ihi mmetọ ikuku, ga-ewerekwa ọwa ahụ. N'ụzọ dị otu a, ego ịchụpụ ego na ụgwọ ndị ọzọ ga-adị ala. Uru ọzọ nke ụzọ ahụ bụ na enweghi ala ọhịa n'okporo ụzọ. N’akụkụ mmiri a ga-enwe ụlọ obibi densiri na obere nbibi, mpaghara azụmahịa yana ebe ndị njem.
Ezubere ka ọ bụrụ uzo ozo ga - eme ka Bosphorus, mpaghara ọrụ ahụ ga - adị n'etiti ala Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir na Arnavutköy. Akụrụngwa niile na ụdị adịgboroja a ga-ewulite n’agwa oru a ga-adịgide n’ókè nke mpaghara ndị a.
Dabere na akụkọ edechara edechara, ogologo nke ụzọ nke Kanal Istanbul Ogwe 45. Ọwa ga-agafe mpaghara Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir na Arnavutköy. Routezọ a ga-amalite site na nrutu nke na-ekewa Oké Osimiri Marmara na Ọdọ Mmiri Küçükçekmece ma na-aga n'ihu n'akụkụ Osimiri Sazlıdere. Mgbe ọ gafere obodo Sazlıbosna iji ruo ọwụwa anyanwụ nke Dursunköy ma gafee obodo Baklalı ga-erute Oké Osimiri Ojii ọdịda anyanwụ nke Ọdọ Terkos. 7 km Küçükçekmece, 3 puku 100 mita Avcılar, 6 puku 500 mita Başakşehir fọdụrụ kilomita 29 ga-adị n'etiti oke nke Arnavutköy.
Efu Istanbul Channel
A na-atụ anya na ego niile nke oru ngo a bụ ijeri 20. Buru n’uche itinye ego dika plọts na ọdụ ụgbọ elu, USD USD 100 Ọ na-eme atụmatụ.
5 ngo a ga-emecha n’afọ
Ihe dị ka puku ndị ọrụ 5 puku ga-arụ ọrụ n'oge ọrụ owuwu ahụ. Mgbe arụchara ọrụ a, ọ ga-eweta ọrụ ruru otu puku mmadụ. 1,350 ga-adabara adaba na ụgbọ mmiri DTW. Dabere na omimi nke ọwa ahụ, a na-atụ anya ihe ruru ihe dịka BillionX cubic metres cubic. Echere na 1,5 nde cubic mita nke ihe ga-esite n'oké osimiri na ala.
A ga-ewu agwaetiti 3
Dabere na nkwupụta ndị dị na akụkọ EIA, ìgwè mbụ ga-enwe ngalaba 3 na mpaghara ha dum ga-abụ hectare 186. Ìgwè nke abụọ nke agwaetiti ahụ ga-enwe agwaetiti 4 na mpaghara ha dum ga-abụ hectare 155. Otu nke ato mejuputara agwaetiti 3 ma gha kpuchie mpaghara 104 hectare. A ga-eji olulu a na-egwu mmiri na mpụga agwaetiti ahụ, na-ejupụta n'ụsọ Oké Osimiri Ojii na iwulite ala mmiri ahụ ruo mpaghara Lake Terkos.
Akwa 6 n’elu Canal Istanbul
Emekwara ụzọ nke àkwà mmiri ahụ. Ewezuga àkwà mmiri, a ga-ewu docks mberede. Iji hụ na njem ụgbọ mmiri, okporo ụzọ dị mma na nzaghachi mberede mgbe ihe ọghọm ma ọ bụ ndakpọ, a ga-ewute 6 na mkpanaka 8 mkpanaka a ga-agakwuru ha n'otu kilomita. Ogologo akpa ndị a ga-adị opekempe 750. Na mgbakwunye, a ga-eme ụlọ ọrụ nzaghachi ihe mberede maka ọrụ nke ọwa mmiri, ụzọ ntinye na ụzọ ọpụpụ, akụrụngwa na ihe nkwenkwe ụgha dị ka usoro okporo ụzọ ụgbọ mmiri, ebe mmiri na-adọ, ebe a na-adọba ọkụ na ebe a na-echere Oké Osimiri Ojii na Marmara.
23 km2 Expropriation ka emee
Mpaghara kacha emetụta bụ Şahintepesi ebe 35 puku mmadụ bi na Altınşehir ebe ndị 14 puku mmadụ bi.
Otu n'ime ihe ndị kacha ekwu gbasara isiokwu na Kanal Istanbul bụ mpaghara nnabata. Dabere na akụkọ ahụ, ụzọ 45 kilomita nke gafere na Küçükçekmece Lake, 8 gafere Sazlıdere. Otu kilomita bụ ọhịa. A ga-ewepu mpaghara azụ azụ na mpaghara a dị ihe dịka square kilomita 12. Ebe ndị mmadụ kacha biri bụ n'etiti ahịrị Kçkçekmece Avc linelar na Baklalı Terkos. N'ime mpaghara ọrụ ahụ ga-emetụta bụ Şahintepesi ebe 23 puku mmadụ bi na Altınşehir ebe ndị mmadụ 35 puku bi.
Banyere Kanal Istanbul Project
Site na mmejuputa atumatu a nke “Kanal Istanbul” a na-eme atụmatụ n’ime ala nke Istanbul, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir na Arnavutköy; Mbenata gabiga ókè-achị na Bosporus, mgbochi nke mere na ike ime mgbe a kwere omume Maritime mberede na igodo nke Bosporus, ndụ, ndokwa nke ngwongwo na gburugburu ebe obibi nche n'ihi na mba niile na-eji Turkish Straits nakwa dị ka Turkey dị mkpa nke ukwuu. Ebumnuche a ezubere iji belata okporo ụzọ ụgbọ mmiri nke na-etinye ndụ na akụ nke ọdịbendị na Bosphorus ume ma nye ohere ọzọ n'ọdụ ụgbọ mmiri na-ekpughe n'okporo ụzọ dị egwu na nbata abụọ ahụ.
Na ugbu a, ihe zuru ezu engineering ọmụmụ na-aga n'ihu Kucukcekmece Lake na odika 45 kilomita ogologo - Sazlıdere oche - Terkos ndị na-esonụ East na paseji nke ụlọ ọrụ na-dechara na-ebu afọ 5 afọ 100 ọnọdụ nke dị mkpa mmezi Istanbul n'ihi ya na-atụ anya na-eje ozi Turkey.
Akuko Nyocha Banyere Mmetụta Gburugburu Ebe Obibi nke Istanbul
Nkwupụta Ntụle Ntụle Ọnọdụ Mgbagha Gburugburu nke Canal Istanbul HERE deductible. (Faịlị a bụ 141 MB)
Ụzọ Canstan Istanbul
Ụzọ ahụ na-eme ka dokwuo anya na Kanal Istanbul
Ịdọ aka ná ntị site na TMMOB: Kwụsị ọwa Istanbul Madness
Kedu ihe kachasị ọhụrụ na Project Istanbul Channel?
Channel Istanbul amalite ọnọdụ ikpeazụ?
Ụzọ ohuru na Ankara-Istanbul YHT Line
CHP onye nnọchi anya onye isi obodo Istanbul: "Ya Channel Ya Ya
Kanal Istanbul, West Istanbul Island na ize ndụ geopolitical
Maka 3 echekwara Grand Istanbul Ọwara na Canal Istanbul…
Ọwa maka ndị ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu Istanbul nọ na Istanbul…
3 echekwara nnukwu Ọwara Istanbul na Ọwa na Istanbul…
Canal Istanbul na 3 Storey Grand Istanbul Ọwara…
A Gọgịrị Obodo Ekwentị Istanbul na Nzukọ Ọgbakọ Istanbul
Project Kanal Istanbul
Ụzọ Istanbul si aga
Onye Minista Transportgbọ njem tara ndị njem ụgbọ njem ebubo na ihe mberede YHT
Gaziray Taken n'okpuruala mkpu ala ahụ amalitela
Anyi na-abia na Qatar Airways '1 Millionaire Passar na Sabiha Gökçen
A ga-etinye ọdụ ụgbọ oloko Sabiha Gökçen n'ọdụ ụgbọ elu na 2020
Ederelarị 80 Nde Euro maka Üçyol Buca Metro
RayHaber Ozi Ntanye 11.12.2019